फिल्म – ZoomNP
ट्ववाइलेटमा लिइएको बलिउडका नायकअक्षयको सेल्फि भाइरल भएपछि
एजेन्सी । बलिउडका नायक अक्षय कुमार यति बेला ट्वाइलेटसँग लिएको सेल्फिको कारण चर्चामा छन्। उनले ट्ववाइलेटमा लिइएको यो तस्वीर आफ्नो फ्यानहरुलाइ फेसबुकमा सेयर गरेका छन् । सेल्फीमा दम लगाकर हैंसे चलचित्रकी अभिनेत्री भुमी पेढनिकर पनि साथमा छिन् ।
खासमा अक्षय एक नयाँ चलचित्र ट्ववाइलेट एक प्रेम कथा खेल्न गइरहेका छन् ।
तस्वीरमा देखिएको जस्तो सिन चलचित्रको पहिलो सिन भएक अक्षयले बताएका छन् ।...
बेश्या कोहि रहरले बन्दैन तर यिनि गर्वसाथ भन्दैछिन हो म बेश्या हु ? ( हेर्नुस भिडियो)
शंकर अधिकारी घायलको लेखन र निर्देशनमा सत्य घट्नामा आधारित सर्ट मुवि रिलिज भएको छ । हो म बेश्या हुँ । एक युबती आफुलार्इ खुलेयाम आफुलार्इ बेश्या भन्दैछे । उ किन बेश्या बनि ? बेश्यालार्इ भोग्छन र छोडछन तर उ किन बेश्या बनि कसैले बुझ्दैनन ।
यहि रहस्य खोतल्ने प्रयास गरेको छ । सर्ट मुवि बेश्याले यस्तै रहस्य खोतलेको छ ।
निर्माता दीपकराज गिरीको ,छक्का पन्जाले पहिलोपटक राख्यो नयाँ रेकर्ड
काठमाडौं । शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘छक्का पन्जा’ले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ ।
कलाकार एवं निर्माता दीपकराज गिरीका अनुसार छक्का पन्जाले नेपालकै पूरानो गोपि कृष्णको ६ वटै हल हाउसफÞुल गराएर रेकर्ड कायम गरेको छ ।
देशभरका अन्य हलहरु भरिभराउ रहेको वितरकहरुले बताएका छन् । फिल्ममा वैदेशिक रोजगारीको समसामयिक कथा छ ।
निर्माता दीपकले लेखेका छन्–
कूनै पनि फिल्मले गोपिकृष्णको ६ वटै हल हाउसफÞुल
गरेको पहिलो रेकर्ड...